Siyaasadda Khaaska ah & Shuruudaha Isticmaalka
Waad ku mahadsantahay inaad booqanayso Boggan, kaas oo leh oo ay maamusho Hay'adda McKnight Foundation.
Waxaan ognahay in asturnaantaada ay muhiim kuu tahay, waxaanan si adag u shaqeynaa si aan u kasbanno oo aan u ilaalino kalsoonidaada. Waxaanu u abuuray Nidaamkan si aan kuu ogeysiinno Macluumaadka Shakhsiyadeed ee aan soo uruurino markaad isticmaasho Boggan, sida aan u isticmaalno una wadaagno Macluumaadka Shakhsiyadeed ee aan soo uruurinno, iyo sida aan u ilaalino asturnaantaada.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan Siyaasaddan ama habdhaqanka asturnaanta, fadlan nala soo xiriir annagoo isticmaalayna macluumaadka hoos ku qoran:
710 South Street Street, Suite 400
Siyaasaddani waa qayb ka mid ah Shuruudaha Isticmaalka
Noocyada Macluumaadka aan Soo Uruurinno
Sida aan u Isticmaalno macluumaadka shakhsiyeed ee laga soo qaado boggan
Sida Loo Helo, Cusboonaysiiyo, ama Sixin Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed
Tallaabooyinka aan qaadano si aan u ilaalino macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed
Sida aan ula wadaagno macluumaadkaaga shakhsiyeed ee dad kale
Carruurta Ka Yar Da'da Thirteen
Xidhiidhada goobaha kale
Siyaasaddan ayaa badali karta
Ha Iska Jirin Mashiinnada
Taariikhda waxtarka leh: Maarso 8, 2018
Fadlan qaado daqiiqado yar si aad dib ugu eegto Siyaasadan ka hor intaadan isticmaalin boggan. Adigoo isticmaalaya boggan waxaad u ogolaaneysaa ururinta, isticmaalka, iyo bixinta macluumaadkaaga shakhsiyeed sida ku cad siyaasaddan. Haddii aadan ku raacsaneyn in uu ku xiran yahay Siyaasaddan, waxaa laga yaabaa inaadan geli karin ama isticmaalin Site this.
Siyaasaddani waxay qayb ka tahay Shuruudaha Isticmaalka ee xukumaya isticmaalkaaga boggan. Xidhiidhkayaga Shuruudaha Isticmaalka waxaa lagu bixiyaa qaybta hoose ee boggan.
Siyaasaddan waxaa laga yaabaa in la dhamaystiro ama loo bedelo waqti ka waqti by "ogeysiisyada asturnaanta" ee ku yaal boggan. Ogaysiisyada asturnaanta waxay bixiyaan heer faahfaahin ah oo aanu ku bixin karno tan guud oo ku saabsan habdhaqanka asturnaanta asturnaanta. Tusaale ahaan, boggaga qaarkood ee boggani waxay ku jiri karaan ogeysiisyada asturnaanta iyagoo bixinaya faahfaahin ku saabsan Macluumaadka Shakhsiyeed ee aanu ku ururinno bogagga, sababta aan ugu baahanahay macluumaadkaas, iyo doorashooyinka laga yaabo inaad hayso hababka aan u isticmaalno macluumaadkaas.
Macluumaadka aad iskaa u shaqeysid. Waxaan soo aruurineynaa Macluumaadka Shakhsiyeed ee aad si ogaan ah, iskaa-wax-u-qabso ah, iyo gacanta u bixiso markaad isticmaasho Boggan. Tusaale ahaan, waxaan soo aruurineynaa Macluumaadka Shakhsiyadeed ee aad bixiso markaad faallo ka bixiso "News and Views" ama sheyga blogka, nagala soo xiriir su'aalaha, booska shirarka ballanqaadka, ama codso deeqda. Qaar ka mid ah macluumaadka aad u soo dirto Boggani waxay noqon kartaa Mabda'da Macmiilka. Dhamaan Content-Generated Content waa in ay u hoggaansamaan Shuruudaha Isticmaalka.
Macluumaadka ka socda Web Browser-kaaga. Waxaan soo aruurineynaa macluumaadka si toos ah noogu soo diraayo shabakada internetka. Macluumaadkan waxaa sida caadiga ah ku jira cinwaankaaga IP, aqoonsiga bixiyaha adeegga internetka, magaca iyo nambarka nidaamkaaga hawlgalka, magaca iyo nuqulka browserkaaga, taariikhda iyo waqtiga booqashadaada, iyo bogagga aad booqatay. Fadlan calaamadee browserkaaga haddii aad rabto inaad barato macluumaadka xogtaada barta uu kuu diro ama sida loo bedelo goobahaaga.
Macluumaadka Mashiinka Moobaylka. Sidoo kale, haddii aad boggan ka heli kartid qalabkaaga mobile, waxaan si toos ah u ururin karnaa macluumaadka qaar ama qalabkaaga. Noocyada macluumaadka aan soo ururinno waxaa ka mid ah nooca qalabka aad isticmaashid, Aqoonsigaaga gaarka ah ee qalabka, cinwaanka IP-ka ee qalabkaaga, nidaamka hawlgalka ee qalabkaaga, nooca shabakadaha internetka ee moobaylka aad isticmaasho, iyo macluumaadka ku saabsan habka aad u adeegsanayso taleefankeena ama codsiga kiniiniga.
In badan oo ku saabsan cinwaanka IP. "IP address" waa lambar gaar ah oo si toos ah loogu meeleeyo kombiyuutarkaaga ama qalabka mobile-ka marka aad internetka ku xiran tahay. Waxaa loo isticmaalaa in lagu garto "goobta" kombiyuutarkaaga si aad u ogaato macluumaadka aad codsan karto.
Cinwaanada IP kuma jiraan magacaaga, cinwaanka emailkaaga, ama macluumaad kale oo kuu aqoonsanaya adiga shakhsi ahaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaan isku dari karnaa cinwaankaaga IP-da oo leh macluumaad kale oo noo ogolaanaya inaan ku aqoonsanno. Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa cinwaankaaga IP-ga si loo helo macluumaad qiimo leh oo ku saabsan shakhsiyaadka isticmaalaya Boggan. Intaa waxaa dheer, haddii aan ka shakisanahay hawlaha aan habooneyn ama fal danbiyeedka ama khatar ku ah amniga Boggaan, waxaa laga yaabaa in aan la wadaagno diiwaanadayada adeegsigeena-kaas oo ku jira cinwaanada IP -ka oo leh hay'adaha ku habboon ee baadhista, kuwaas oo isticmaali kara macluumaadkaas si loo raadiyo oo loo aqoonsado shakhsiyaadka .
Kukiyada iyo Tiknoolojiyada La midka ah. Waxaan isticmaalnaa "cookies" iyo tiknoolajiyada kale ee webka si loo ururiyo macluumaadka oo lagu taageero qaar ka mid ah muuqaalada boggan. Tusaale ahaan, waxaan u isticmaali karnaa teknoolajiyadaan:
waxay ururiyaan macluumaadka ku saabsan siyaabaha soo booqda isticmaalka boggan-kuwaas oo bogagga ay soo booqdaan, kuwaas oo isku xiraya ay isticmaalaan, iyo inta ay kudhifayaan bog kasta;
taageeraan sifooyinka iyo shaqeynta boggaan - tusaale ahaan, si aad u badbaadisid dhibaatada dib-u-celinta macluumaadka horayba ugu jirtey xogtayada ama si aan kuugu soo sheegno goobaha aad ku dhajisey booqashooyinkii hore; iyo
shakhsiyadeeyo waayo-aragnimadaada marka aad adeegsanaysid boggan.
Guud ahaan, macluumaadka aan soo ururineyno isticmaalidda tiknoolajiyadan shabakada ma aqoonsana shakhsi ahaan sidaas daraadeed ma aha "Macluumaadka Shakhsiyeed". Si kastaba ha ahaatee, waxaan isku dari karnaa macluumaadka aan soo ururineyno iyaga oo isticmaalaya tiknoolajiyadan shabakadaha leh macluumaad kale oo noo ogolaanaya inaan ku aqoonsanno.
Guud ahaan, haddii aadan rabin inaad hesho cookies, waxaad ku dari kartaa galkaaga inuu ku diido cookies ama inuu kuugu digo marka cookie la geliyo kombiyuutarkaaga. Inkasta oo aan lagaa rabin in aad aqbasho cookies markaad booqanayso Boggaan, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad isticmaasho dhammaan hawlaha boggaan haddii burcadaada ay diiddo keegagaaga.
Waxaan u isticmaali karnaa Macluumaadka Shakhsiyadeed ee aanu ku soo aruurinno boggan:
inaad bixiso macluumaadka, badeecooyinka iyo adeegyada aad codsato;
ujeedooyinka badbaadada, amaahda, ama ka hortagga khayaanada;
inay ku siiyaan adeegga macaamilka ee waxtar leh;
si ay kuu siiyaan khibrad shakhsi ahaaneed markaad isticmaasho Saanadkan;
inay kula soo xiriiraan macluumaadka iyo ogeysiisyada la xiriira isticmaalkaaga boggan;
inay kula soo xiriiraan dalabyada gaarka ah iyo macluumaadka kale ee aan rumaysannahay inay daneyneyso adiga (adoo raacaya doorashooyinka asturnaanta ee aad naga soo bandhigtay);
inay kugu martiqaadaan inaad ka qeyb qaadatid sahan oo aad na soo wargeliso nala soo xiriir (sida waafaqsan doorashooyinka asturnaanta ee aad adigu noo soo bandhigtay);
si aad u fahamto baahiyahaaga iyo danahaaga;
si loo wanaajiyo Mawduuca, u shaqeynta iyo isticmaalka suurtagalnimada Site this;
si loo hagaajiyo alaabta iyo adeegyadeena;
si loo hagaajiyo dadaalkeena suuqgeynta iyo dadaalka dhiirrigelinta; iyo
ujeedo kale oo lagu aqoonsaday ogaysiis khaas ah ama heshiis kale oo adiga iyo annaga.
Fadlan hoosta ka eeg macluumaadka ku saabsan doorashooyinka aad ka qabto hababka aan u isticmaalno Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed.
Guud. Waxaanu ixtiraameynaa xuquuqdaada inaad ku sameyso xulashooyin ku saabsan hababka aanu u ururinno, u isticmaalo, una shaacino macluumaadkaaga shakhsiyeed. Doodaha kor ku xusan waa xulashooyinka aad ka qabto ku-soo-gelinta cookies ee kombiyuutarka iyada oo loo marayo Boggan. Intaa waxaa dheer, guud ahaan waxaan ku weydiin doonaa inaad sheegto xulashooyinka wakhtiga aan soo aruurineyno Macluumaadkaaga Shakhsiyeed. Tusaale ahaan, waxaan ku siineynaa fursad aad naga doorato in aad hesho war-is-gaarsiiyo naga soo socda. Intaa waxaa dheer, waxaan ku dari doonaa xiriirka "ikhtiyaarka ah" ee warside kasta oo elektaroonik ah ama email kuugu soo diri karno, si aad noogu soo sheegto inaadan rabin inaad hesho warar noocaan oo kale ah oo mustaqbalka ah.
Xilliyadii hore ee lagu sharraxay. Waxaa laga yaabaa inaad beddesho doorbooyinkii horay loo sheegay ee ku saabsan sida aan u isticmaalno Macluumaadkaaga Shakhsiyeed. Haddii aad rabto in lagaa saaro liisaska boostada, fadlan nala soo xiriir annagoo isticmaalayna macluumaadka kor ku xusan. Marka aan hayno macluumaadka aan u baahannahay, waxaan kaa saari doonaa liisaska boostada intii aad codsatay. Fadlan na siiso wakhti macquul ah si aad u maamusho codsigaaga.
Sida Loo Helo, Cusboonaysiiyo ama saxo Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed
Haddii aad rabto inaad gasho, cusbooneysiiso ama saxdo Macluumaadkaaga Shakhsiyeed, fadlan nagala soo xiriir annagoo isticmaalayna macluumaadka kor ku xusan. Waxaanu kuugu soo jawaabi doonaa waqti macquul ah iyo, kiis kasta, waqtiga xaddidan ee sharcigu dhigayo. Waxaa laga yaabaa inaan ku weydiino macluumaad dheeraad ah si loo xaqiijiyo aqoonsigaaga. Xaaladaha intooda badan, waxaanu bixin doonaa helitaanka iyo saxida ama tirtiri doonaa wixii macluumaad aan sax ahayn ee aad ogaato. Xaaladaha qaarkood, si kastaba ha ahaatee, waan xadideynaa ama diidi karnaa codsigaaga haddii sharcigu noo oggol yahay ama u baahan yahay inaan sidaas yeelno ama haddii aanan awoodin inaan xaqiijino aqoonsigaaga.
Waxaanu haynaa tallaabooyin macquul ah oo maamulka, muuqaalka, iyo farsamada ah si loo ilaaliyo sirta iyo amaanka Macluumaadka Shakhsiyeed ee aad soo gudbisid ama ku soo gudbiso Boggan. Nasiib darro, ma jirto bogga, server ama xog-ururinta si gebi ahaanba amaan ah ama "hacker caddayn." Sidaa darteed ma xaqiijin karno in macluumaadkaaga shakhsiyeed looma sharixi doono, si xun loo isticmaalo ama lumay shilka ama falalka aan sharciyeysnayn ee dadka kale.
Sida aan ula wadaagno macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed
Qodobbada Saddexaad ee Xisbiga. Waxaan la wadaagnaa Macluumaadka Shakhsiyeed ee lagu soo ururiyey Saanadkan iyada oo la wada-shaqeeyayaasha saddexaad ee u shaqeynaya ama naga wakiil. Tusaale ahaan, waxaan isticmaalnaa iibiyaasha saddexaad si loo dhiso loona shaqeeyo boggaan, si loo fududeeyo dhamaystirka internetka ee codsiyada deeqda, si loo sameeyo sahan, iyo inagoo naga caawinno dadaalkeena xayeysiinta. Qalabkan qaybta sadexaad ayaa laga yaabaa inuu u baahdo macluumaad kugu saabsan si uu u guto waajibaadkooda.
Sanduuqa Maaliyadda ee McKnight Fund for Neuroscience. Waxaa laga yaabaa in aan la wadaagno macluumaadka shakhsiyeed ee la ururiyey iyada oo la adeegsanayo sanduuqa McKnight Endowment Fund for Neuroscience, kaas oo si khaas ah loogu maalgeliyo Hay'adda. Tusaale ahaan, haddii aad iska qorto Boggaan Shirkadda sannadka ee sanadka, waxaanu la wadaagi doonaa Macluumaadka Shakhsi ahaaneed ee aad ku soo gudbisay diiwaangelintaada Dammaanadda.
U hoggaansanaanta sharciyada iyo ilaalinta xuquuqdeena iyo xuquuqda dadka kale. Waxa laga yaabaa in aanu shaaca ka qaadno Macluumaadkaaga Shakhsiyeed markaan, rumaysad fiican, aaminsanayn in shaacintu ay ku haboon tahay in ay u hoggaansamaan sharciga, amar maxkamadeed, ama amar maxkamadeed. Waxa kale oo laga yaabaa in aan shaaca ka qaadno Macluumaadkaaga Shakhsiyeed si looga hortago ama loo baaro dembi suurtagal ah, sida khayaano ama xatooyada aqoonsiga, si loo ilaaliyo amniga Soonkan, si loo dhaqan galiyo ama loo adeegsado shuruudaha internetka ee Isticmaalka ama heshiisyada kale, ama inaan ilaalino xuquuqdeena ama hantida ama xuquuqda, hanti, amniga isticmaaleyaasha ama kuwa kale.
Sida lagu qeexay Ogeysiiska Gaarka ah. Waxaanu xaq u leenahay inaanu u soo bandhigno macluumaadkaaga shakhsiyeed sida lagu sharaxay digniin kasta oo sir ah oo lagu dhajiyey bogga Boggan oo aad bixiso macluumaadkaas. Adiga oo bixinaya Macluumaadkaaga Shakhsiyeed ee boggaa waxaad ku ogalaanaysaa bixinta Macluumaadka Shakhsiyeed sida lagu sharxay ogaysiiskaas gaarka ah.
Sida lagu sharxay Heshiis kasta oo kale. Waxaanu xaq u leenahay inaanu u soo bandhigno macluumaadkaaga shakhsiyeed sida ku qeexan heshiisyada kale ee adiga iyo annaga.
Waanu ku faraxsannahay boggan waxaanna ku dadaalaynaa inaan hubinno in aysan khiyaanayn dadka da 'kasta. Si kastaba ha noqotee, Sannadkan looma qorsheyneynin carruurta ama caruurta da'doodu ka hooseyso 13 jir aan lahayn fasax waalid ama ilaaliye. Haddii aad rumaysan tahay in ilmo uu soo gudbiyay Macluumaadka Shakhsiyeed ama ku soo marey Sannadkan iyadoon oggolaansho iyo kormeerka waalidka ama mas'uulka, fadlan nala soo xiriir annagoo isticmaalayna macluumaadka kor ku xusan si aan u qaadno tallaabo haboon.
Boggaan waxaa ku jiri kara xiriirka shabakadaha internetka ee ay maamusho hay'ado kale, oo ay ku jiraan bogagga internetka ee ay bixiyaan adeeg bixiyeyaasha saddexaad ee qaybaha kale iyo dhinacyada kale ee saddexaad. Nidaamkani ma khuseeyo Macluumaadka Shakhsiga ee laga soo ururiyey bogga sadexaad ee dhinac kasta. Marka aad galeyso boggaga internetka ee saddexaad iyada oo loo marayo isku xidhka boggan, fadlan qaado daqiiqado si aad dib ugu eegtid siyaasadda asturnaanta ee ku qoran goobta.
Siyaasadani waxay sharraxaysaa siyaasadeena iyo nidaamyadayada hadda la xiriira Shakhsiga
Macluumaadka aan ku soo aruurinno boggan.
Waxaan si joogta ah u horumarineynaa oo ku daraynaa sifooyinka iyo farsameynta boggaan iyo adeegyadeena aan u soo bandhigno boggan. Isbedeladaan (ama isbedelada sharciga), waxaa laga yaabaa inaan u baahano inaan cusbooneysiinno ama dib u eegno Siyaasaddan. Sidaa awgeed, waxaannu xaq u leenahay inaan cusbooneysiinno ama aan wax ka beddelno Siyaasadan wakhti kasta, iyada oo aan lahayn ogeysiis hore, adigoo soo diraya nuqulka dib loo eegay ee siyaasaddan ka dambeysa isku xirka "Siyaasadda Khaaska ah" ee ugu hooseysa bog kasta oo ka mid ah boggaan. Isticmaalkaada sii socota ee boggan ka dib markaan soo dhajino Siyaasadda dib loo cusbooneysiiyey waxay ka dhigeysaa heshiiskaaga inuu ku xiran yahay siyaasadda dib loo eegay.
Si sahlanaato, markasta oo Siyaasaddan bedesho, waxaanu kuu soo diri doonaa adigoo soo diraya ogaysiis ku saabsan boggeena bogga lixdan maalmood. Waxaan sidoo kale cusbooneysiin doonaa "taariikhda wax ku oolka ah" xagga sare ee boggan. Haddii in ka badan lixdan maalmood oo u dhaxaysa booqashooyinkaaga boggan, hubi inaad hubiso taariikhda ku-meel-gaadhka ah si aad u ogaato haddii Siyaasaddan dib loo eego ilaa booqashada ugu dambeysa.
Waxaad ka heli kartaa nuqulka hadda ee Xeerkan wakhti kasta adigoo gujinaya cinwaan "Xeerka Qarsoodiga" ee hoose ee bog kasta oo ka mid ah boggan.
Sharciga California wuxuu u baahan yahay Siyaasaddan si aan wax uga qabanno sida aan uga jawaab celinno "Do-Not-Track ('DNT') signalka 'oo ay bixiso barta internetka. Sababtoo ah isbedelka tiknoolajiyada iyo ficil-galinta gudaha warshadaha ee ku saabsan macnaha DNT signals, ma aan hadda damaanad qaadin in aan u hoggaansamo signallada DNT.
Ereyga "Content" wuxuu loola jeedaa dhammaan software-ka iyo koodhka oo ka kooban ama loo isticmaalo inuu ku shaqeeyo boggan, iyo dhammaan qoraalada, sawirada, sawirrada, sawirrada, sawirada, cajaladaha maqalka, video-ka iyo dhageysiga fiidiyoowga ah iyo qalabka kale ee la heli karo boggan, oo ay ku jiraan Maadada Caamka ah.
Ereyga "Feedback" waxaa loola jeedaa Mawduuca aad ku soo dirto ama ku soo marinayso Boggaan si gaar ah oo ku saabsan sida aan u hagaajin karno Saanadkan iyo badeecadaha iyo adeegyada aan ka helno boggan.
Ereyada "Foundation" "annaga", "anaga," iyo "our" waxay tixraacayaan Hay'adda McKnight Foundation.
Ereyga "Macluumaadka Shakhsiyadeed" waxaa loola jeedaa macluumaadka adiga ku aqoonsan kara shakhsi ahaan, kali ahaan ama la socda macluumaadka kale ee nala heli karo. Tusaalooyinka Macluumaadka Shakhsiyeed waxaa ka mid ah magacaaga, cinwaanka, iyo cinwaanka emailka.
Ereyga "Siyaasadda" waxaa loola jeedaa siyaasadda asturnaanta ee internetka.
Waqtiga "Site" waxaa loola jeedaa website kasta oo ay leedahay Hay'adda oo Siyaasaddan la soo dhejiyay, oo ay ku jirto (laakiin aan ku xaddidnayn) www.mcknight.org, neuroscience.mcknight.org, ccrp.org, annualreport.mcknight.org, iyo www.stateoftheartist.org.
Ereyga "Content-Generated Content" wuxuu loola jeedaa dhammaan qoraalka, sawirada, sawirrada, sawirrada, sawirrada, cajaladaha maqalka, video, dhageysiga-fiidiyowga, iyo Mawduuca kale ee aad bogga ama boggaan u isticmaashid iyadoo la adeegsanayo qalabka xiriirka bulshada in aad diyaar u noqoto oo aanad ka dhiganeyn Jawaab celin. Mid ka mid ah habka Caawinta Macmiilka ay ka duwan tahay macluumaadka kale ee aad na siiso waa in, marka mar la soo gudbiyo, User-GeneratedContent waxaa badanaa lagu sameeyaa si dhakhso ah oo loogu talagalay dadka kale. Tusaale ahaan, faallooyinka aad u dirto blogyada waxay ka kooban yihiin Content-User Generated Content.